FICUS "KARIKA": DARYEELKA GURIGA, SAWIR, WARAABIN IYO IFTIIN - SOOSAARKA DALAGGA
Geedka geedka ee gurigaaga - ficus "Karika"
Sawirada waxaa ka mid ah qoyska tufaaxa.
Caan ku ah dhadhanka gaarka ah iyo sifooyinka wanaagsan ee miraha, taas, nasiib daro, uma dulqaadan karo safar dheer.
Sidaa darteed, dad badan, fursadda kaliya ee lagu tijaabiyo berde cusub ayaa ah in lagu koro warshad guriga.
Goobta dhalashada ee "Karika" - Aasiyada Yar-yar. Waxaad inta badan ka heli kartaa warshadkan Bariga Dhexe, ee Crimea, ee Caucasus.
Meelaha dabiiciga ah, geedkan gariirka ah wuxuu gaari karaa toban mitir dhererka.
Geedka gaaban ee dhirta geedka waxaa lagu daboolay jilif cawl-madow.
Caleemaha dhajinta ee qaabka wadnaha ah ayaa loo qaybiyaa 3-7 saamile, halkii baaxad weyn: baaxadda buug-yarahan oo dhan ilaa 20iyo dhererka - 10-25 sentimitir.
Geedka koonfureed ee quruxda badani wuxuu leeyahay taariikh qadiim ah: marka hore waxa lagu sheegay Baybalka.
Inta lagu jiro nolosheeda dheer, waxay magacyo badan ka heshay: geed berde, macaan, khamri, geed geed. Si kastaba ha ahaatee, khabiiradu waxay wacaan warshadan FicusCarica (Ficus Karica).
Geedka wuxuu magaciisa ka helay meeshii uu asal ahaan ka soo jeeday: gobolka buuraha Caria, gobolka Aasiyada Yar.
Fikus "Karika" waa mid aad u kulul. Tani waxay si gaar ah u tahay dhirta dhalinyarada.
A geed berde ah oo la dhow yahay waa in lagu hayaa meel u dhow iftiinka oo lagu hayo heerkulka qolka. qiyaastii 250C.
Fikus "Karika" ayaa noo yimid oo ka yimid subtropics, sidaas darteed waxay u baahan tahay qoyaan badan.
Xilliga xagaaga, dhirta waa in la waraabiyaa marar badan intii suurtogal ah ee biyaha jilicsan, biyo la dejiyo heerkulka qolka.
Inta lagu jiro mudada diirran, waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la xoqo ubaxa leh buufin iyo qubeys diiran.
Laakiin kiiskii labaad, waxaa fiican in dheriga laga daboolo biyaha (ku rid boorso saar kuna xidhan saldhigga asliga ah) si looga fogaado kor-u-kaca iyo leexashada xididada.
Waa muhiim! Xilliga jiilaalka, geedo berde ah waa in si weyn loo yareeyo.
Hawada qallalan waxay burburin kartaa dhirta, sidaa daraadeed waxa ugu wanaagsan inaanay ku dhowaan meel u dhow batoonka.
Geedka berde ayaa si fudud u jecel yahay iftiin dhalaalaya, sidaas darteed horumarkiisa meel mugdi ah ama hooska joogtada ahi waa wax aan macquul ahayn.
Waxaa haboon in la dhigo "Karika" foornada ugu qorraxsan, kaliya wax yar ayaa ka daboolaya shumacyada tooska ah ee leh daahir iftiin leh.
Inta lagu jiro xilliga koritaanka firfircoon: guga iyo xagaaga ficus "Karika" waxay u baahan tahay diirimaad Heerkulka qolka waa inuu ahaado +22 - + 250C.
Xilliga jiilaalka, dhirta ayaa jecel inay qaboojiso: 8-10 heerkul oo kuleyl ah ayaa ku filan. Geed berbera uma dulqaadanayo dhibco heerkul ah oo degdeg ah iyo dhaxan daran.
Cudurka ficuska "Karika" (syconia) waa meel bannaan, axillary, oo aan ku filnayn.
Waxay ka kooban yihiin labo nooc: rag iyo dumar.
Dumarka dheddig-laboodka ah, marka loo eego, waxay noqon kartaa mid gaaban ama mid dheer. Waxay ka timid dheddig-jimicsi leh jaantus dheer oo ah in midhaha geedka ah la sameeyay ka dib - miro casaan leh.
Waxay kala soocaan ma aha oo kaliya dhadhan macaan, qurux badan, laakiin sidoo kale by tiro cajiib ah ee sifooyinka wanaagsan.
Diyaar u ah in la beero noocyada ficuska, oo, xitaa mar mar, diyaar u tahay inay ku farxaan ubax xaaladaha gudaha ku yaal? Waxaan kugula talinaynaa inaad doorato mid ka mid ah noocyada soo socda: Saddex xagal, Lirat, Ginseng, Balsamine ama Moklame.
Fikus "Karika" ma aha oo kaliya warshad adag oo faa'iido leh, laakiin sidoo kale qurux badan.
Daryeelka saxda ah ayaa kaa caawin doona inuu u noqdo bonsai asalka ah.
Geedka laanta ayaa gacan ka geysanaya manjooyin joogto ah ee caleemaha.
Si loo fuliyo nidaamkan waxay lagama maarmaan u tahay guga horraanta ka hor inta muuqaalka dhalashada caleemaha.
Maraqyada waxay u baahan yihiin in ay sameeyaan dhuxul la jarjaray. Tani waxay ka hortagi doontaa in laamaha la qalajiyo iyo jirro.
Wixii koritaan degdeg ah iyo horumarinta ficus "Karika" waxay u baahan tahay ciid ku filan nafaqo leh. Xulashada habboon waxay noqon doontaa in lagu daro qaybo siman oo cawska, ciid, humus iyo dhulka caleen.
Mararka qaarkood patina cad ayaa laga arki karaa lakabka sare ee dhulka. Xaaladdan, waa in la beddelo.
Warshadu waxay u baahan tahay bacrimin joogta ah: mar kasta 10-14 maalmood oo aad u baahan tahay inaad ku quudiso ficus leh xal dareere ah, isbedelka u dhaxeeya macdanta iyo maadooyinka organic.
Jooji quudinta keliya xilliga qaboobaha.
Tijaabada dhalinyarada ee "Karika" waa in lagu celiyaa sanad walba, mar kasta 3-5 sentimitir kororka weelka weelka.
Dhirta qaangaarka ah waxaa lagu bedeli karaa wax yar: hal mar 2 sano.
Iyo marka ficus gaaro cabbirka weyn ee ku filan, waxay ku xaddidan tahay beddelidda daaha sare ee dhulka.
Qaadista waa in la sameeyaa bisha Maarso.
Caawimaad: gelitaanka ficus "Karika" inta lagu guda jiro ku-tallaalidda ilmagaleenka hoose waxay kor u qaadeysaa samaynta xididada cusub waxayna kordhisaa heerka koritaanka dhirta.
Dhiibaan geed geedo ah laba siyaabood: gooyn iyo abuur.
Habka 1aad. Faafinta adoo raacaya waa in la fuliyaa xilliga diiran. Taas awgeed waxaad u baahan tahay inaad jarjaro jirid dherer dherer leh ku dhawaad ​​15 santimitir, meeshi qallalan ilaa 10-12 saacadood, ka dibna tag beeraha.
Si aad ugu guulaysato, waxaad u baahan tahay inaad jarjariso carrada aad u nafaqo leh: tusaale ahaan, isku dar ah peat iyo ciid, biyo iyo in la abuuro xaaladaha aqalka dhirta. Taas awgeed waxaad isticmaali kartaa weel dhalada ah ama polyetylen.
Weelka lagu xiro waa in lagu meeleeyaa meel haadi ah iyo heerkulka hawada waa in la hubiyaa. qiyaastii 250C.
Xaaladaha oo dhan, xididdada ayaa soo muuqan doona bil iyo badh, ka dib markii geedka lagu beeray karti yar oo ilaa hal litir.
Habka 2aad. Abuurka miraha laga soo saaro midhaha waa in lagu maydhaa biyo oo la qalajiyaa maalin, ka dibna lagu ridaa weel carrada oo abuuraya saameyn aqalka dhirta lagu koriyo.
Qalabka aqalka dhirta yaryar waa in la nadiifiyaa maalin kasta, haddii loo baahdo, ciidda ku buufin biyo kulul.
Dhowr wiig ka dib, caleemaha ugu horeysa waa in la sameeyaa, kuwaas oo lagu beeray karo dhulka.
Caawimaad: dhirta ay ku koraan adoo isticmaalaya miraha waxay bilaabi karaan in ay midho dhalaan sanadka labaad ee nolosha, taas oo aan ahayn kiiska "Karika" ee laga helay abuurka: midhaha ayaa soo muuqan doona dhowr sano ka dib, ama ma muuqan doono.
Fikradda sawirka "Karika":
Nasiib darro, dhammaan noocyada ficusku waxay awood u leeyihiin in ay carqaladeeyaan milkiilayaasha quruxda leh ama xitaa miraha, laakiin inkastoo tani, intooda badani waxay caan ku yihiin beeralayayaasha sababo kali ah: Ampelniy, Bengal iyo Melkolistnyy waxay siiyaan raaxo, Amstel King, Retuz iyo Ali oo aan qabyo ahayn ee xannaanada, iyo Pumila White Sunny, Burburinta, Benedict iyo De Dumbbell waxay si dhab ah u awoodaan inay qurxiyaan gudaha gudaha iyo xafiiska.
Caleemaha dhirta ayaa ku xanuunsan kara (qalalan iyo jaalle) oo aan lahayn iftiin ama qoyaan la'aan.
Karika "Karika" waa mid aad u adag oo aan bini-aadanimo lahayn, si kastaba ha ahaatee, ma aha mid aan laga tallaalin waxyeello cayayaanka: xajmiga, xakamaynta, caarada caarada.
Habka ugu fudud ee looga takhalusi karo caarada caarada ayaa ah in la warshadeeyo marar badan biyo diirran.
Kiisaska ugu sareeya, waxaa lagu daaweyn karaa xalka anshaxa.
Dhirta firfircoon ee mulkiyad yar ayaa burburin kara geedka.
Si looga hortago tan, waa inaad ka saartaa nalalka cudurka qaba, tirtir dhirta biyaha. Mararka qaarkood waxaa suurtagal ah in la isticmaalo karbofos.
Shchitovok ayaa ugu fiican si loo soo ururiyo gacanta, ka dibna la xakameyn karo fukuska sigaarka-tubaakada ama kerosene-saabuun.
Ficus karika waxaa si fiican loogu yaqaan alaabta daawooyinka.
Miraha cusub ee warshadda waxaa loo isticmaalaa daaweynta cudurrada nidaamka wadnaha, marinka mindhicirka, mareenka sare ee neefta.
Haysashada guryaha dawooyinka iyo caleemaha geedka.
Waxay kaa caawin doonaan in laga takhaluso neefta neefta, shubanka, si caadi ah u shaqeeya kelyaha.
Waa muhiim! Ku xiran dadka qaba sonkorowga, turjubaanka, iyo sidoo kale cudurrada caabuqa ee xanuunka caloosha iyo mindhicirka.
Fikradda "Karika" waxay qurxin doontaa wax kasta oo gudaha ah, sababtoo ah waxa aan caadi ahayn oo soo jiidasho leh.
Iyo haddii ay jirto daryeel habboon, waxay ku farxi doontaa milkiilayaasha leh casiir leh, kareysa, miraha la yaab leh.